Padmaavat – Page 3 – Filimside.net
Rasmi: filimka Padmaavat iyo Isniintiisa 4-aad ganacsiga uu sameeyay waa filim Classic ah
Filimka weyn Padmaavat ayaa si heer sare ah isku celiyay Isniintiisa afaraad waxaana xusid mudan filimada marka ay Isniin afaraad gaaraan inay gaabis weyn sameeyaan laakiin midkaan maba hakanaayo! Padmaavat Isniintiisa afaraad wuxuu keenay 1.50 Crore asigoo ku […]
Padmaavat oo ku dhow 500 Crore($75M) ganacsigiisa isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka
Filimka Padmaavat ayaa ganacsi adag weli sameenayo wuxuuna keenay 8 Crore todobaadkiisa afarad sedexda maalmood ee ugu horeyso asigoo haatan gudaha Hindiya ka keenay 262.50 Crore (Trade Figure) oo nadiif ah ama canshuurta kadib sida shabakada BOI soo daabacday. […]
Rasmi: filimka Padmaavat iyo Sabtigiisa afaraad ganacsiga uu sameeyay gudaha Hindiya
Filimka weyn Padmaavat ayaa sare u kac xoogan sameeyay sabtigiisa afaraad wuxuuna keenay 2.50 Crore ilaa 2.75 Crore lacago u dhaxeeyo wadarta guudna haatan wuxuu marayaa 260 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday. Waxaa muuqato in Padmaavat todobaadkiisa afaraad […]
Rasmi: filimka Padmaavat iyo Jimcadiisa 4-aad ganacsiga uu sameeyay
Filimka weyn Padmaavat ayaa weli ganacsi wacan sameenayo asigoo keenay 1.50 Crore (Trade Figure) Jimcadiisa afaraad wuxuuna sameeyay 55% hoos u dhac marka Jimcadiisa sedexaad lala bar bar dhigo taasi oo muujineyso in filimkaan weli si adag […]
Hadii aan daawanay Padmaavat sido kale waxaan sanadkaan sugeynaa sedex film oo ay kala hogaaminayaan hogaamiyasha filmka Padmaavt. hogaamiyaasha filmka Padmaavat mid walba film ayaa u diyaarsan sido kalena uu ka howl wado waqtigaan waxana […]
Kadib markii filimka Padmaavat uu keenay todobaadkiisa sedexaad 31 Crore (Trade Figure) waxaan dib u eegnay keedka shabakada Boxoffice India iyo 10-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen todobaadka sedexaad. Waxaa cajiib ah in […]
Inaba caadi ma ahan filimka Padmaavat wuxuu todobaadkiisa sedexaad keenay 31 Crore (Trade Figure) taasi oo wadartiisa guud ka dhigtay inuu haatan maraayo 255.50 Crore (Trade Figure). Sida shabakada BOI cadeesay Padmaavat wuxuu noqday filimka afaraad ee lacagaha […]
Ranveer Singh Iyo Deepika Padukone waa lamaane nolosha dhabta ah xiriir jaceyl ka dhaxeyo sida caalamka oo dhan laga wada og yahay waxayna guud ahaan wada sameyeen sedex film oo guulo waaweyn gaaren kuwaaso kala […]
Filimka Padmaavat ayaa ganacsi wacan sameeyay maalintii shalay ahayd (Talaado) wuxuuna ka faa’iideestay fasaxii feestada Mahashivratri ee gobolada qaar ka jiray. Sida shabakada BOI xaqiijisay Padmaavat wuxuu keenay 3.50 Crore (Trade Figure) Talaadadiisa sedexaad taasi oo ka dhigtay […]
Padmavaat oo ganacsi adag sameeyay Isniintiisa sedexaad kani Padman ayuu halis ku yahay
Filimka weyn Padmavaat waxaa la islahaa todobaadkiisa sedexaad ganacsigiisa gaabis ayaa ku imaan doono madaama Padman tiyaatarada ku cusbaa. Padmavaat ayaa keenay 3 Crore ilaa 3.25 Crore Isniintiisa sedexaad waana ganacsi adag. Waxaa cajiib ah […]